Service Delivery in Kenneth Gardens according to Vusi Shabangu - Kenneth Gardens
Service Delivery in Kenneth Gardens according to Vusi Shabangu
Last update on September 1, 2013
under Archive, People
Lapha sikhuluma noMnumzane uVusi Shabangu owazalwa ngonyaka ka 1962-03-02. Wazalelwa endaweni yase Swaziland, ehlala nabazali bakhe kanye nezingane zakubo nezakhe.Waqala ukuhlala eKenneth Gardens ngoyaka kwa 2007. Isizathu sokuthutha kwakhe ezohlala kulendawo walimala engozini yemoto, walimala unyawo nohlangothi waba nenkinga yokuhamba.Kwakumele athuthele endaweni ezoba seduzane nesibheledlela nezitolo kanye nendawo yamabhange ibe seduze kwakhe ngenxa yokuthi ubengasakwaz nokushayela imoto yakhe.Ingakho ke wakubona kungcono ukuthi ahlale kulendawo ngoba isibhedlela iKing edward iseduzane. Wafika yedwa umndeni wakhe wawushiya eSwaziland.
Uthi kwakunzima impela ukuthutha eze kulendawo ashiye umndeni wakhe wonke kanye nezingane zakhe ,azoqala impilo entsha nabantu abasha angabazi. Kulesimo ayekuso indawo wayengayijwayelanga kodwa kuhambeni kweskhathi wajwayela waqala wenza nabangani. Ubaba uVusi usixoxela kabanzi ngesimo sokuphepha salapha eKenneth Gardens. Uthi uma kungathiwa akanikeze amaphoyinti angathi iqanda ngenxa yokuthi lapha kulendawo abanalo isango lapha eliqashiwe ngonogada.
Abagunyaza abantu ilungelo lokungena,kungena noma ubani nanoma ingasiphi iskhathi. Ngisho nezimoto ezingaziwa ziyangena ziyaphuma ngaphandle kokunikezwa imvumo ngabahlali balendawo. Ubaba uyakholelwa ukuthi inkinga yalesi senzo ingenxa yokuthi alikho isango elivalwayo ukuze kungene abantu abahlala kulendawo nalabo abanikwezwe ilungelo lokungena ngokusemthethweni. Uyalinganisa ukuthi umuntu engafika lapha netruck agqekeze endlini yomuntu athathe yonke impahla yasendlini ahambe, akekho ongakwazi ukuthi ngubani wakephi owenze lesenzo ngoba ayikho indawo lapho izimoto ezifike zibhalise khona inumber plate zazo. Umuntu uyaphuma nje engabikanga kumuntu ukuthi ungubani wakabani uze noma uphuma kubani.
Usixoxela ukuthi useke wahlangabezana nenkinga yokugqekezelwa ekhaya lakhe, wayelele wavuka kungasekho lutho endlini. Bathatha yonke impahla yasendlini kanye nezingubo zokugqoka imbala,kuyilamhlanje nje akanayo ngisho into yokugqoka ngenxa yalenkinga eyamehlakalela. Waya ukuyovula icala emaphoyiseni kodwa akukho ngisho noyedwa owaboshwa eboshelwa leli cala,wagcina ngokutshelwa ngumseshi ukuthi bazomufonela uma sekukhona ubufakazi. Kuze kube yinamhlanje akekho owazikhokha izimpanhla zakhe zenani elibalelwa ku R40 000. Kuze kube yilamhlanje akasoze waphinda akwazi ukuzithenga lezi zimpahla kwazise akasasebenzi ngenxa yokulimala kwakhe.
Uyakholelwa ektheni isimo sokuphepha kulendawo uma kungaba khona ukubambisana komphakathi sisangashitsha sibe ngcono. Ubona ukuthi ukuze kube nokuphepha kulendawo kudinga ukubiyelwa bese ifakwe isango lapho okuzoba umuntu onokhiye kuphela ozokwazi ukungena aphume kulo. Kube khona ne intercom lapho abavakashi bezobhaza khona bacele.Ukuhlangatshezwa esangweni kanjalo noma sebehamba baphelezelwe umuntu onegunya lokuhlala kulendawo. Uyakholelwa ekthenini uma abantu abaphethe lendawo bengase banake izicelo zabahlali konke lokhu kungenzeka. Ngenxa yokuthi bahlezi bethenjiswa izulu nomhlaba kodwa ekgcineni kungenziwa lutho.
Selokhu kwaba ngunyaka ka 2007 bathenjiswa idrive way ephephile lapho kuzohamba khona izimoto zabo zingalimali kodwa namanje akukho lutho olwenziwa kwagcinwa ngezithembiso nje kuphela. Uthi akasasboni ngisho nesidingo sokuvota ngoba akukho abakuzuzayo ngokuvota kwabo njengabahlali balendawo.
Ubaba uShabangu akajabulile neze ngeziphathi mandla zakulendawo kangangoba akasasiboni ngisho isidingo sokuthi abantu bakulendawo bavote okanye bavotele iqembu elibusiya ngalesi sikhathi. “uma ngabe sekuzovotwa basikhipha ngisho ezindlini zethu imbala besgqugquzela ukuthi siyobhalisa basithembise izulu nomhlaba kodwa uma sebeluwinile ukhetho bazithola izikhundla ekade bezifuna abazigcini izithembiso zabo zokusinika impilo engcono’ usho kanje ubaba uShabangu.
Ubaba akaziboni eminyaken ezayo esahlala kulendawo ngenxa yokungathokozi ngesimo senhlalo yakhona
Click here to listen to the interview(Part 1)
Click here to listen to the interview(Part 2)
September 1, 2013 @ 15:09:24 [Current Revision] by sphongoe
September 1, 2013 @ 14:39:32 by Thula
September 1, 2013 @ 14:38:54 [Autosave] by Thula
August 29, 2013 @ 12:36:03 by sphongoe
August 29, 2013 @ 12:32:02 by sphongoe
August 29, 2013 @ 12:28:15 by sphongoe
August 28, 2013 @ 10:14:25 by sphongoe
August 28, 2013 @ 10:12:06 by sphongoe
August 28, 2013 @ 09:57:09 by sphongoe
← DUT Food and Nutrition Consumer Sciences Students Donate Sport Equipment And Stationery To Kenneth Gardens Community
The State of Kenneth Gardens According To Tiny Canham →
One Response to “Service Delivery in Kenneth Gardens according to Vusi Shabangu”
Simone September 26, 2014 at 11:04 am #